သေသူများ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
ဆောင်းပါး > အနာဂတ် > သေလွန်သောသူတို့သည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း
Dass die Gläubigen bei Christi Erscheinen zum unsterblichen Leben auferstehen, ist die Hoffnung aller Christen. Daher kann nicht überraschen, dass der Apostel Paulus, als ihm zu Ohren kam, dass einige Mitglieder der Kirche in Korinth die Auferstehung leugneten, ihr Unverständnis in seinem 1. Brief an die Korinther, Kapitel 15, energisch zurückwies. Als Erstes wiederholte Paulus die Botschaft des Evangeliums, zu der auch sie sich bekannten: Christus war auferstanden. Paulus erinnerte daran, wie der Leichnam des gekreuzigten Jesus in ein Grab gelegt und drei Tage später leibhaftig zur Herrlichkeit auferweckt worden war (Verse 3–4). Dann erläuterte er, dass Christus als unser Vorläufer aus dem Tod zum Leben auferstanden war – um uns den Weg zu unserer künftigen Auferstehung bei seinem Erscheinen zu weisen (Verse 4,20-၃။ ၄)။
သို့သော်သူကကောရိန္သုမြို့သားများအားအသိဥာဏ်ရှိစေပြီးအနာဂတ်ယုံကြည်သူများရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုသံသယဝင်လျှင်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းအတွက်အဓိပ္ပာယ်မဲ့မှုနှင့်အဓိပ္ပာယ်မဲ့သောအကျိုးဆက်များရှိလိမ့်မည်ဟုသူကိုအသိပေးခဲ့သည် - အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ခရစ်တော်သည်သင်္ချိုင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်ဟုသူတို့ယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆင်ခြင်တုံတရားအရသေလွန်သောသူတို့သည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုမယုံလျှင်ခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ထမြောက်တော်မူခြင်းကိုငြင်းဆိုခြင်းသာဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမခံရလျှင်ယုံကြည်သူများသည်မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ပါ။ သို့သော်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူခြင်းကြောင့်ယုံကြည်သူများသည်သူတို့လည်းရှင်ပြန်ထမြောက်လာမည်ကိုသေချာစေသည်ဟုကောရိန္သုမြို့သားများထံစာရေးခဲ့သည်။
Paulus hatte diese gute Nachricht immer wieder gepredigt – dass Christus zum Leben erweckt worden war und dass die Gläubigen bei seinem Erscheinen ebenfalls auferstehen würden. In einem früheren Brief schrieb Paulus: «Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auf- erstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen» (1. သက်သာလောနိတ်မြို့ 4,14). Dieses Versprechen sei, schrieb Paulus, in Einklang «mit einem Wort des Herrn» (Vers 15).
ချာ့ချ်သည်သခင်ယေရှု၏ဤမျှော်လင့်ချက်နှင့်ကတိတော်များကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီးအစမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုယုံကြည်သည်။ အေဒီ ၃၈၁ မှ Nicene Creed က“ လူသေတို့၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာ၏အသက်တာလာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်” ဟုဆိုသည်။ ထို့အပြင်အေဒီ ၇၅၀ ခန့်ကတမန်တော်များ၏ယုံကြည်ချက်အရ "သေလွန်သူများထာဝရထမြောက်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ " ဟုအတည်ပြုသည်။
သူတို့ကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမှာကိုယ်ခန္ဓာဘာကြောင့်လိုရတာလဲ၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုမေးတယ်၊ သူတို့သည်ဝိညာဉ်ရေးနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာရွေးနှုတ်ခြင်း၏ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိပြီးပြီမဟုတ်လား။ ဘာသာရေးပညာရှင်ဂေါ်ဒွန်ဒီ။ ဖီကဤသို့ဆိုသည် -“ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဆုကျေးဇူးနှင့်အထူးသဖြင့်ဘာသာစကားများ၏အသွင်အပြင်အားဖြင့်သူတို့သည်ကတိထားရာဝိညာဏ“ ကောင်းကင်” တည်ရှိမှုထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာပြီဟုကောရိန္သုအသင်းသားများယုံကြည်ကြသည်။ သေသည့်အခါကိုယ်ခန်ဓာကိုယ်မှသာဖယ်ထုတ်ပစ်ရမည့်ခန်ဓာကိုယ်သာလျှင်၎င်းတို့အားသူတို့၏ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့်ကွဲကွာနေဆဲဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်နှင့်မသေနိုင်သောအသက်တာသည်မည်သည့်အရာနှင့်တူမည်ကိုအတိအကျတွက်ချက်။ မရချေ။ ဒါပေမယ့်ဒီခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုရဲ့သဘောသဘာဝကိုကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယေဘူယျဖော်ပြချက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Dies bedeutet, dass unser Auferstehungsleib nicht aus vergänglichem Fleisch und Blut sein wird wie der Leib, den wir jetzt kennen – nicht mehr angewiesen auf Nahrung, Sauerstoff und Wasser, um leben zu können. Paulus erklärte nachdrücklich: «Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können; auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit» (1. ကောရိန္သု ၁5,50).
Paul Kroll က